16-7404 - qunnit
Thank you very much for shopping at qunnit. If there are any quality problems with our products, please call us to communicate with customer service, we will handle it with the most positive attitude.
1.There are product quality problems within7days, unconditional replacement.
2. The product is damaged and fully assisted in handling.
3. Without unpacking, the goods can be returned.
1.If the product quality problem is caused within7days, instead of human factors, please ensure that the packaging is complete, and the corresponding information of the problem product is given to the customer service, we will unconditionally exchange the goods for you.
2. If the product is damaged due to human error, the freight will be borne by the user and we will actively assist in the processing.
3. If the goods are not unpacked and returned, the freight will be borne by the user.
4. If the product is unpacked, no quality problems will be returned, the freight will be borne by the user, and the 15% handling fee will be deducted.
5. The final interpretation right belongs to the platform.
ကျွန်မတို့၏ကုမ္ပဏီမှ ပစ္စည်းရငွေချေစနစ်ဖြစ်သောကြောင့် လူကြီးမင်းစိတ်ချစွာဝယ်ယူနိုင်ပါသည်ရှင်။ အထက်ပါအချက်အလက်များကိုသာဖြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်အော်တာမှာယူခြင်းကိုအတည်ပြုသောခလုတ်အားနှိပ်ပြီးမှသာ ပစ္စည်းများကိုအောင်မြင်စွာမှာယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်မှတ်ချက်
1. ပစ္စည်းရောက် ငွေချေစနစ် မရသေးသော မြို့များမှ ဝယ်ယူသူများ အနေဖြင့် KBZ Pay သို့မဟုတ် CB Pay တို့ဖြင့် ငွေပေးချေပြီး သက်ဆိုင်ရာ စာတိုက် သို့မဟုတ် ကားဂိတ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်ပစ္စည်းရောက်ငွေချေရသောမြို့များ :ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး ၊ နေပြည်တော် ၊ ပြင်ဦးလွင် ၊ မုံရွာ ၊ မိတ္ထီလာ ၊ တောင်ကြီး ၊ လားရှိုး ၊ မော်လမြိုင် ၊ မြစ်ကြီးနား ၊ မူဆယ် ၊ မြဝတီ ၊ ပဲခူး ၊ ကလေး ၊ မိုးကုတ် ၊ တာချီလိတ် ၊ မကွေး ၊ ဖားအံ
2.ပစ္စည်းသုံးမျိုးနှင့်အထက် တပြိုင်တည်းမှာယူပါက စရံငွေ ပေးချေရပါမည်။
3.အော်တာမှာပြီးနောက် 2-3ပတ် စောင့်ပေးရပါမယ်။
4.hotline ဝန်ဆောင်မှု့အချိန်မှာ မနက် ၉နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ဖြစ်ပါသည်။ကျေးဇူးပြု၍ စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး စောင့်ပေးပါ။ဝယ်ယူအားပေးမှု့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
Copyright © 2020-2021 Qunnit All Rights Reserved